ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်အိမ်မှာ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆီများ
HomeLifestyleHealth & Beautyကျန်းမာရေးအတွက် သင့်အိမ်မှာ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆီများ
ပူစီနံဆီ သုံးလေးစက်လောက် သင့်ရဲ့ နထင်အရေပြားထဲသို့ ပွတ်လိမ်းပေးပါက ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာလာချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ဆီးစပ်အောင့်ခြင်း ကိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါက ပူဆီနံဆီကို လက်ဖက်ဆီ ၂စက် ၃စက်လောက်ရောစပ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်လိမ်းပေးပါက သက်သာစေပါတယ်။ သွားကိုက်ခြင်း၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်း ဝေဒနာခံစားနေရလျှင် စားသုံးဆီကို ပူစီနံဆီ ၂စက် ၃စက်ရောစပ်ပြီး ဝါဂွမ်းတွင်စွတ်ပြီး ငုံထားပေးပါက အချိန်တိုအတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
Citrus ဆီတွင် လိမ္မော်၊ သံပုရာ၊ ကျွဲကော၊ လီမွန် စတဲ့ သစ်သီးများရဲ့အာနိသင်တွေပါဝင်တာကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး အဆီများကို လျော့ကျစေပါတယ်။ Citrus ဆီကို သင့်အိမ်မှာ ထားထားလျှင်
လေကောင်းလေသန့်ကို ရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းရဲ့ ရနံ့ဟာ အစာစားချင်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေတာကြောင့် အဆီနဲ့ ဝိတ်တက်မှု့ကို ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ စားသုံးဆီ သို့မဟုတ် သံလွင်ဆီ နှင့် Citrus ဆီကိုရောစပ်ပြီး ဟင်းချက်ရာတွင် လည်ကောင်းအသုတ်သုတ်ရာတွင်လည်ကောင်း ထည့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ အဆိပ်ဓာတ်များကိုလဲ ဖယ်ရှားပေးစေပါတယ်။
လက်ဖက်ဆီဟာ သင့်မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ဝက်ခြံ၊ အမဲစက် များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး တစ်ပတ်အတွင်း သင့်အား ရလဒ်ကောင်းတွေ ပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖက်ဆီ ၂စက် ၃စက်ကို ခရင်မ် တစ်မျိုးမျိုးနှင့်ရောစပ်ပြီး
စံပယ်ဆီဟာ သင့်ဆံကေသာကို နက်မှောင်တောက်ပြောင်စေပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာ ဒါမှမဟုတ် Hair balm ထည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် စံပယ်ဆီ ၄-၅ စက်လောက်ထည့်ပြီး ရောလိမ်းခြင်းဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ရလဒ်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နာခေါင်းတစ်ဝှိုက် ရောင်ယမ်းခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ အဆုတ်မွန်းကြပ်ခြင်းတို့အတွက် လိမ်းပေး၊ ရှူပေးရုံဖြစ် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ထိခိုက်ရှနာများအတွက် သွေးကိုချက်ခြင်းတိတ်စေပြီး၊ အရည်ကြဖုထခြင်း စတဲ့ ဒဏ်ရာမျာကိုလဲသက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ထင်းရူးဆီကတော့ သင့်အိမ်သန့်ရှင်းရေးအတွက် အရမ်းကို အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကြမ်းတိုက်ဝတ်၊ အဝတ်စများတွင် ထင်းရူးဆီကို စွတ်ဖြန်းပြီး သန့်ရှင်းပါက ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကိုသေစေပါတယ်။
အရပ်မြင့်တာ ပိုပြီးပေါ်လွင်စေဖို့ မှန်ကန်တဲ့အ၀တ်အစားဒီဇိုင်း ၆မျိုး
ကေ်ာဇောပေါ်က လက်သည်းဆိုးဆေး အစွန်းအထင်းများကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ?
ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ ပြန်နွှေးမစားသင့်တဲ့ အစားအစာများ
ကလေးငယ်တွေ အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ အရေးအကြီးဆုံး စည်းမျဥ...
ယောက်ျားလေးတွေ ရှာဖွေတတ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆွ...
Listerine(လစ်စထရင်း)ကို နောက်ထပ်အသုံးပြုလို့ရမယ့် နည်းလမ်း(၁၀)မျိုး
အရက်ကို ပညာရှိဆန်ဆန် ဘယ်လိုသောက်သုံးမလဲ
ပရိုဂရမ်ရေးသားသူတွေတောင် အံ့အားသင့်လောက်မယ့် နည်းလ...
Skinny (အသားကပ်) ဂျင်းဘောင်းဘီတွေကို ဒီနှစ်နွေရာသီ...